Chiang Mai, mankalaza ny Parady LGBT voalohany tao anatin’ny folo taona i Thailandy · Global Voices teny Malagasy
Chiang Mai, mankalaza ny Parady LGBT voalohany tao anatin'ny folo taona i Thailandy
Voadika ny 04 Marsa 2019 9:01 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, Español, Português, English
Chiang Mai Parady 2019. Loharanon-tsary: pejin'ny hetsika Facebook
Ity lahatsoratra nasiam-panitsiana ity dia avy ao amin'ny Prachatai, tranokalam-baovao mahaleotena ao Thailandy, ary naverina navoaka eto amin'ny Global Voices ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Ny 21 Febroary 2019, nankalaza ny fetiben'ny Parady LGBT voalohany i Chiang Mai hatramin'ny taona 2009, taorian'ny nanafoanana ny Parady farany tao an-tanàndehibe noho ny fanorisorenana nataon'ny mpanohitra ny mpanao fihetsiketsehana.
Ny 21 Febroary 2009, norahonana ary noterena hajanona noho ny fanoheran'ny mpanohitra ny Paradin'ny fireharehana faharoa tao Chiang Mai. Nosakanan'ny mpanao fihetsiketsehana miisa 200 teo ho eo ny parady ary nohodidin'izy ireo tamin'ny kamiao sy ny fanamafisa-peo ary nitorahan'izy ireo sy nanevatevany ireo mpandray anjara. Nangataka ireo mpikarakara ireo mpanao hetsi-panoherana mba hanafoana ny parady satria faniratsirana ny kolontsain'i Chiang Mai ny paradin'ny pelaka amin'izy ireo. Nanakana ny mpandray anjara hafa mba tsy hanatrika ny hetsika ihany koa ireo mpanao hetsi-panoherana, ary notaterina fa tsy nisy nanampy ny polisy izay tokony hiambina ny hetsika.
Nitarika ny fananganana ny vondrona ‘Sao-sow-ed’ (izay adika hoe ‘Asabotsy faha 21 ‘) sy ny fanambarana ny datin'ny 21 Febroary ho ‘Atsaharo ny Herisetra Atao amin'ny Andron'ny LGBTQIs ‘ ity zava-nitranga ity saingy tsy nankalaza Parady Fireherehana hafa i Chiang Mai raha tsy tamin'ity taona ity indray.
Notontosaina tamin'ny faha-10 taonan'ity hetsika ity ny Parady Fireherehana taona 2019 tao Chiang Mai. Milaza ny pejy Facebook-n'ny hetsika fa “natao hahatsiarovana ity hetsika ity sy hitondra miaraka ny vondrom-pfiarahamonina. Mijoro hisian'ny fiarovana izahay ankehitriny. Mijoro hananana zo ho lavitry ny herisetra izahay. Mijoro hanan-jò hanatsarana ny fiainanay izahay sy hisaintsainana ny tantaran'ny vondrom-piarahamoninay. “
Nanomboka tao amin'ny Foibem-pivavahana tao Chiang Mai izay tokony nanombohan'ny Parady tamin'ny taona 2009 ny Parady Fireharehana taona 2019 ary nifarana tao amin'ny Vavahady Thaphae. Nisy ihany koa ny Fifaninanana ambasadaoron'ny Parady Fireharehana tao Chiang Mai taona 2019. Novakian'ny mpikarakara ihany koa ny fanambaràna ny tantaran'ny tolona nataon'ny vondrom-piarahamonina LGBT iadiana amin'ny herisetra ary nisy ny fijoroana niaraka tamin'ny labozia izay natao ho fahatsiarovana ny hetsika tamin'ny 21 Febroary 2009.
📸 : @thancha.k #Chiangmaipride2019 #pride #Chiangmai #Thailand #lgbtq
A post shared by Thanchanok Kaweewattana (@thancha.k) on Feb 22, 2019 at 5:39am PST
Satria efa akaiky ny fifidianana taona 2019 dia misy ny fijerena bebe kokoa ny zon'ny LGBT, indrindra ny fitoviana amin'ny fanambadiana. Manolotra ny politika izay mampiroborobo ny fanatsarana ny fiainan'ny LGBT sy ny fitoviana ny antoko Politika amin'izao fotoana izao. Eo am-pamolavolana lalànan'ny Fiarahan'olon-droa ihany koa ny firenena. Na dia eo aza ny tsy fahatomombanany dia hahafahan'ny olon-droa mitovy fananahana any Thailandy mahazo fankatoavana ara-dalàna izay efa nandrasan'izy ireo hatry ny ela ity volavolan-dalàna ity raha toa ka lany.
Mbola miatrika fanavakavahana sy herisetra isan'andro ny vondrom-piarahamonina LGBT Thailandey. Mbola tsy afaka manao fitafy araka ny maha-lahy sy maha-vavy azy ireo any amin'ny sekoly sy ny oniversite ireo mpianatra sarindahy sy sarimbavy, ary tsy afaka manova ny karazana anondroana azy ny olona nanova fananahana. Ary tsy hahazo ny zo mitovy amin'ny mpivady mahazatra ny olon-droa mitovy fananahana na dia ho lany aza ity volavolan-dalàna momba ny Fiarahan'olondroa ity. Na izany aza, misy ny fanantenana fa mizotra mankany amin'ny tokony ho izy ny lalan-kalehan'ny firenena.
3 andro izayShina
4 andro izayMyanmar (Birmania)
6 andro izayAmerika Latina